သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အမှာ | USAHello ကနေအလုပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
အလုပ်ရှာဖွေခြင်းသာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. အခုဆိုရင်သင်အလုပ်ဆည်းပူးကြပြီ, အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူ, ဒါကြောင့်သင်အောင်မြင်ဖို့နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၌ထရွှေ့နိုင်ပါတယ်. ဆက်ဖတ်ရန်
လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်အလုပ်မပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီ. ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဒီအခြေအနေကိုအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျအကြောင်းပြချက်များစွာအဘို့သင့်အလုပ်စွန့်ခွာဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. ဒါကကြီးမားတဲ့အကူးအပြောင်းနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အလုပ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက်ညာဘက်ခြေလှမ်းကိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦးလစာတိုးတောင်းအသစ်တခုအတှေ့အကွုံဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာသင်ပြေးလမ်းလျှင်ခက်ခဲနိုင်. လက်ျာအချိန်, ဘာသာစကား, နှင့်အပြုအမူသင်တဦးတည်းရရှိခဲ့ကြသည်သင်၏မန်နေဂျာစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
တိုင်းအလုပ်လူတစ်ဦးအလုပ်ခွင်ထဲမှာအချို့သောအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်. privacy ကိုမှလက်ျာဘက်, ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေလွတ်လပ်ခွင့်, တရားမျှတတဲ့လစာသူတို့ထဲကအချို့ ဆက်ဖတ်ရန်
သင့်အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကိုင်ဝေးလံသောအလုပ်နည်းလမ်းများ. သငျသညျကိုအဝေးမှအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အလုပ်အကိုင်များကိုလေ့လာပါ. ဝေးလံခေါင်သီအလုပ်မှာကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင့်ကုမ္ပဏီမှာပိုကောင်းတဲ့အနေအထားရာထူးတိုးခံရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့. ဤတွင်ရာထူးတိုးရကူညီခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်အဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့လုပ်ဖို့သင်သည်တတ်နိုင်ငါးအရာဖြစ်ကြ၏။ ဆက်ဖတ်ရန်
များစွာသောမိန်းမ America မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်ရှိသည်. ဒါပေမယ့်အလုပ်မှာအမြိုးသမီးမြားပြဿနာများရှိသည်. လေးအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေကြပြဿနာများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကိုဖတ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
4 သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အကြံပေးချက်များ | USAHello4 သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အကြံပေးချက်များ 1. သငျသညျအသီးအသီးကိုပြုလိမ့်မည်အရာကိုနေ့စဉ်စီမံခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Make. 2. နေ့အဘို့သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရေးချ. 3.
5 သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေတာမှလျှို့ဝှက်ချက်များ5 သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကယောဘရှာဖွေခြင်းစေရန်လျှို့ဝှက်ချက်များ. သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ? သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေခြင်းပြုပါရန်လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါ. ကျောင်းနှစ်ကုန်လာသေး၏. နွေကာလနီးသည်ကိုငါတို့သည်တစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်မှတဆင့်နီးပါးတစ်ဝက်များမှာ. အချို့သောလူများအတွက်, ဒီကျောင်းဆင်းပွဲကိုဆိုလိုသည်, နေရာအသစ်သို့မဟုတ်အသစ်မြို့တော်သို့ရွေ့လျား။